cudurka kale oo loo yaqaan 'hantavirus' oo qof ku diley Shiinaha: halka ka ogow wax walba oo aad uga baahantahay fayraskan iyo sida uu u faafo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA cudurka kale oo loo yaqaan ‘hantavirus’ oo qof ku diley Shiinaha:...
cudurka kale oo loo yaqaan ‘hantavirus’ oo qof ku diley Shiinaha: halka ka ogow wax walba oo aad uga baahantahay fayraskan iyo sida uu u faafo
kadib markii dhawaan cudurka ka dillaacey coronavirus adduunkana ku faafey, tiro kale oo cudurro ah ayaa sidoo kale soo ritay dad shacab ah ee wadan ka shiinaha. Kiisaska hargabka doofaarka iyo ifilada shimbiraha ayaa horay looga soo sheegay India iyo dalal kale. Hadda, nin u dhashay Shiinaha ayaa laga helay cudurka loo yaqaan ‘hantavirus’.
Telefishanka Shiinaha ee ‘Global Times’ ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka in ninkani oo ka yimid Gobolka Yunnan uu ku dhintay isaga oo ku sii socday Gobolka Shandong isaga aha darawal bas Isniintii. 32-da qof ee kale ee baska saarnaa ayaa iyagana laga baaray fayraska. hadaba suasha koowaad ee lays waydiina ayaa ah.
Waa maxay saxda loo yaqaan hantavirus?
Marka loo eego Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC), hantaviruse waa qoys faayras ah oo ku faafa badanaaba jiirka oo ku sababi kara cuduro kala duwan dadka.
wuxu sababi kartaa hantavirus pulmonary syndrome syndrome (HPS) iyo qandhada haemorrhagic oo uu leeyahay cudurka kalyaha (HFRS).
Cudurkan maaha mid hawada raaca ama hawo-qaadashada waxa u faafi karaa oo keliya dadka haddii ay ku soo gaadho qofka xanuunka qaba kaadidiisu, saxaradiisu, iyo candhuufta oo aan badney yado qaaditaankeedu waxaa kale oo aad ku qaadi karaa hadii uu ku qaniino xawayaan qaba cudurkaasi. j
Calaamadaha lagu garto qofka qaba hantavirus
Calaamadaha hore ee HPS waxaa ka mid ah daal, qandho, iyo murqo xanuun, oo ay weheliso madax xanuun, dawakhaad, dhaxan iyo dhibaatooyin caloosha ah. Haddii aan la daaweyn, waxay kuu horseedi kartaa qufac iyo neefsashada oo yaraata waxayna noqon kartaa mid dilaa ah, iyadoo heerka dhimashada uu yahay 38% boqolkiiba, sida laga soo xigtay CDC.
In kasta oo calaamadaha bilowga ah ee HFRS ay wali isku mid yihiin, waxay sababi karaan dhiig karka hooseeya, naxdin daran, daciifka xubnaha, iyo kelyaha oo hawl gaba.
Habka hantavirus ee ugu muhiimsan Mareykanka ee sababi kara HPS waa viruska ‘Nombre virus’, oo uu ku faafo jiirka deerada.
Fayrasku wuxuu keenaa cudur neef-mareenka oo astaamaha hore waxaa ka mid ah madax xanuun, dawakhaad, qandho, lallabbo, shuban iyo calool xanuun. Kuwaan waxaa ku xiga si kadis ah calaamadaha neefsashada daran.
Heerka dhimashada hantavirus wuxuu gaari karaa 35-50%, aad ayuu uga sarreeyaa coronavirus. Ma jiro daweyn, daawo ama tallaal infakshanka hantavirus.
HPS lama gudbin karo qof ilaa qof, halka gudbinta HFRS ee dadka dhexmara ay tahay naadir.
Sida CDC-da, xakameynta tirada dadka waa istaraatiijiyadda koowaad ee looga hortagayo infekshinka hantavirus.
Daawo:Biyo Xidheen laga Samaynayo Degmada Sallaxlay.